Fifaninanana Masina!!! | news2dago |
news2dago 24 Novambra, 2008 09:47 Ankapobeny Rohy maharitra Verindrohy (trackback) (0)
Velon-taraina ny orinasa malagasy oe tsy mandeha ny entana satria mitobaka ny vokatra vahiny eny @ tsena! isan'izany ohatra ny orinasa savonnerie tropicale izay tsy izy ovina @ malagasy eo @ famokarana savony. Ny tranombarotra Magro moa no omeny tsiny @ izany @ famarotany ilay savony lava citron plus!!! Gaga ihany aho naheno ity ady hevitra tao @ kidaona maraina t@ herin'andro satria dia ohatra manome tsiny be fahatany ny tranombarotra Magro ny olona sasany kanefa iarahana mahalala fa orinasa nanana ny tombondahany ity savonnerie ity satria nanao monopole izy efa an-taonany maro saingy tsy mba nahay nanitatra sy nanatsara ny vokatra novokariny.
Ilay savony "nosy" kely fony za mbola zaza no mbola amidy @ izao za efa raim-pianakavina izao. Tsy mba nisy fanovana ny fonony sy ny habeany fa dia iny ihany ilay savony h@ izao. Alaim-panahy ihany aho manao oe tsy mahay marketing angamba ny mpitantana ao @ ity orinasa ity fa variana any @ zavatra hafa. Manaraka izany dia somary misy fofona izay ny savony lava ka tsy dia tiako ny mividy azy satria tena tsy mahazaka ilay savony ny tanako manao allergie. Dia aleoko mihitsy mampiasa ilay citron plus sady tsy misy fofona no mandroatra tsara rehefa hanasana lamba. Mila manao ezaka izany ny orinasa malagasy manenjika ilay fenitra tokony arahana fa tsy tokony hitabataba etsy sy eroa fotsiny. Ny mpanjifa mifidy izay mety aminy fotsiny.
Hivoaka @ alakamisy izao ihany koa ny sarimihetsika malagasy "malok'ila fan'4" izay vokarin'ny scoop digital izay mpamokatra sarimihetsika anisany sangany eto Madagasikara. Eo ihany koa dia mbola mimenomenona ihany koa oe lasan'ny mpanao piraty ny tsena sy ny vola @na miliara fa izy tsy mahazo tombony. Kanefa amiko dia ny piraty no famatarana voalohany oe tena misy mpankafy izay ilay vokatra natao. Io na film vazaha aza misy foana ny piraty e! tsy misy fika io fa tsy maintsy misy foana.
Norombahan'ny akademia ny antsika ny amboaran'i madagasikara 2008 eo @ baolina fandaka sic!!! (fantsiarovana an'i rajentlisa elaela tokoa izy izay tsy nanoratra lahatsoratra momba azy ity! lol). Nody ventiny izany ny rano natsakaina 8 taona aty aorina ny niorenan'ity ivo toerana fanofanana sy fampianarana ankizy hilalao baolina. Mitovy tsy misy valaka @ ilay Asec mimosa atsy cote d'ivoire izy ity ary voalaza fa ilay namorona an'io ivo toerana io ihany no nanorona ity academie ny antsika.